MAREYKANKA oo ‘laga rabo’ inuu bixiyo magta dadkii uu ku dilay gudaha Soomaaliya - Banaadisom
Home Wararka Maanta MAREYKANKA oo ‘laga rabo’ inuu bixiyo magta dadkii uu ku dilay gudaha...
MAREYKANKA oo ‘laga rabo’ inuu bixiyo magta dadkii uu ku dilay gudaha Soomaaliya
Warbixin cusub oo ka soo baxday Hay’adda u dooda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa waxaa si faah faahsan looga hadlay qorshaha ay dowladda Mareykanka kula baxayso ciidameeda ku sugan Soomaaliya.
Amnesty International ayaa shaaca ka qaaday in Mareykanka laga doonayo, ka hor inta uusan la bixin ciidamadiisa inuu bixiyo magta dadkii uu ku dilay gudaha Soomaaliya.
Warbixinta hay’adda ayaa lagu xusay inay jiraan qoysas badan oo dhibanayaal u ah ciidamada Mareykanka, kuwaas oo ay waxyeelo ka soo gaartay duqeymahooda.
Hay’adda ayaa intaasi ku dartay in inta uu socday howl-galka Mareykanka ee Soomaaliya lagu dilay dad badan oo rayid ahaa, kuwa kalena lagu dhaawacay, kuwaas oo qaarkood weli jirkooda ay ka muuqata waxyeelada gaartay.
Sidoo kale hay’adda ayaa hoosta ka xariiqday in loo baahan yahay in Mareykanka uu bixiyo xuquuqda dadka ay waxyeeladu u geysteen ciidamadiisa.
Deprose Muchena oo ah madaxa Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa tilmaamay in Mareykanka ay waajib ku tahay bixinta magdhowga dadka ay dhibaatada ka soo gaartay howl-galkiisa, iyada oo la raacayo shuruucda caalamiga ah.
“Waxa keliya la eegayo waa hubinta cadaaladda iyo ilaalinta shacabka, in magdhaw la siiyo dadka ehelkooda wax ku noqday howlgalka waa mid sharci ah, haddii uu sidaas kusoo afjarmayo howlgalka Mareykanka, balse haddii uu sii soconayo waa in taxadar dheeraad ah loo yeeshaa rayidka ku sugan meelaha la duqeynayo.” ayuu yiri Muchena.
Mareykanka oo Soomaaliya ay ku joogaan ku dhowaad 700 oo askari ayaa qorsheynaya in bartamaha bisha Janaayo ee sanadka ee 2021-ka uu ciidamadiisa kala baxo gudaha Soomaaliya, kuwaas oo horey loogu eedeeyey inay waxyeeleeyeen dad shacab ahaa 5fcf2c403a5cb
Previous articleMidowga Musharraxiinta oo ‘qorshe u diyaariyey’ doorashada 2021
Next articleSomaliland oo fariin cusub oo ka dhan ah Soomaaliya u dirtay Beesha Caalamka